Fa iza no olona mahalala ny ao am-pon’olona, afa-tsy ny fanahin’ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny ao am-pon’ Andriamanitra afa-tsy ny Fanahin’Andriamanitra ihany. 1 Kôr 2:11
Ny fanambarana dia tsy zava­-baovao avy amin'ny famoronana na noforonin'olombelona,fa fanehoana izay tsy fantatry ny olombelona raha tsy mbola nambara. Ireofahamarinana miezinezinasy mandrakizay ao amin'ny filazantsara dia ambara amin'ny alalan'ny fandinihana lalina sy fampietrena tena eo anatrehan'Andriamanitra. Mitarika ny sain'ny mpandinika ny fahamarinana Ilay Mpampianatra avy any andanitra, ary amin'ny alalan'ny fitarihan'ny Fanahy Masina, dia ampahafantarina azy ny fahamarinana ao amin'ny Teniny. Ary tsy misy fomba azo antoka sy mahomby hahazoana fahalalana, raha tsy misy fitarihana. Teny fikasana avy amin'ny Mpamonjy ny hoe: "Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitaridàlana anareo ho amin’ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo" - Jao.16:13.
Amin'ny alalan'ny fanomezana ny Fanahy Masina no ahafantarantsika ny Tenin'Andriamanitra.Manoratra ny mpanao Salamo : "Inona no hiarovan’ny zatovo ny làlan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no nitadia­vako Anao; aza avela hivily hiala aminhy didinao aho (..). Ampahirato ny masoko, mba hahitako zava-mahagaga ao amin’ny lalànao.
Entanina isika hikatsaka ny fahamarinana tahaka ny harena miafina. Manokatra ny sain'izay mpandinika marina ny fahamarinana ny Tompo, ary mahatonga azy hahatakatra ireo fahama­rinan'ny fanambarana ny Fana­hy Masina. Izany no tian' ny mpanao salamo lazaina rehefa nangataka izy mba hosoka­fana ny masony hibanjina ireo zava-mahagaga avy amin' ny lalàna. Rehefa maniry mafy ny fahatsaran'i Jesôsy Kristy ny fanahy iray dia afaka mahazo an-tsaina ny vonina­hitra any amin'ny tontolo mandrakizay izy. Amin'ny alalan'ny fanampian'ny Mpampianatra avy any an­danitra ihany no ahafahantsika mahalala ireo fahamarinana avy amin'ny Tenin'Andriama­nitra. Ao amin'ny sekolin’ i Kristy no hianarantsika ny ho mora fanahy sy tsy miavona am-po satria ao no hanomezana antsika ny fahalalana ireo zava-miafin'ny zava-panahy.
Ilay nanome tsindriman­dry ny Teny no mpanambara marina ny Teny. Noravahan' i Kristy tamin'ny fisintonany ny fijerin'ireo mpihaino azy ho amin'ny lalan'ny natiora tsotra ny fampianarany sy ho amin'ny zavatra mahazatra izay hitan'izy ireo sy ataony andavanandro. Koa nosari­hiny avy amin'ny zavatra hita maso ho amin’ny Zava-panahy ny sainy . SSW,1 Desambra 1909.